Bhaibheri: Nei Uchifanira Kufarira Bhaibheri?
Nei Uchifanira Kufarira Bhaibheri?
Bhaibheri ndiro bhuku rinofarirwa kupfuura mamwe ose panyika. Sei richifarirwa? Chikonzero chokutanga ndechokuti rinotaura zvinoitika muupenyu hwevanhu. Rinonyatsotaura nyaya chaidzo dzevanhu, kugarisana kwavaiita nevamwe uye ukama hwavaiva nahwo naMwari. Nyaya dzacho dzine zvidzidzo zvinobatsira uye dzakanyorwa zviri nyore dzisingapotereri, zvokuti dzinogona kushandurirwa mumazana emitauro, dzichinzwisiswa nevanhu munyika yose vangararama chero panguva ipi zvayo. Uyewo mazano eBhaibheri anoshanda nguva dzose.
Chinonyanya kukosha ndechokuti Bhaibheri haringotauri kuti ibhuku rinotaura nezvaMwari asiwo kuti rinobva kuna Mwari. Rinozivisa zita raMwari, unhu hwake uye chinangwa chake chisingachinji chakaita kuti asike nyika nevanhu. Bhabheri rinotaurawo nezvokurwisana kwezvakanaka nezvakaipa kwava nenguva refu, inova nyaya inokwezva zvikuru ichava nemagumo anofadza. Kuverenga Bhaibheri uine chido chokunzwisisa kunoita kuti uve nekutenda uye tariro.
Mashoko ari muBhaibheri hapana kumwe kwaanowanika. Somuenzaniso, Bhaibheri rinotiudza chokwadi panyaya dzakadai sedzinotevera:
Kwakabva vanhu uye chinoita kuti titambure
Zvakaitwa naMwari kuti anunure vanhu
Remangwana renyika nevanhu
Wadii kumboongorora mapeji anotevera woona kuti Bhaibheri rinotaura nezvei?
MASHOKO ANE CHOKUITA NEBHAIBHERI
Dingindira: Kudzorera kuchaita Umambo hwaMwari kururama nerugare panyika
Zviri Mariri: Mabhuku 39 echiHebheru (ane dzimwe ndima shoma muchiAramaiki) uye mamwe mabhuku 27 muchiGiriki
Kunyorwa: Rakanyorwa nevanhu vanenge 40 kwemakore anenge 1 600, kubva muna 1513 B.C.E. kusvika munenge muna 98 C.E.
Mitauro: Zvikamu zvaro kana kuti iro rose zvava kuwanika mumitauro inopfuura 2 500
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nei Uchifanira Kufarira Bhaibheri?